W LAASCAANO – Page 109 – Puntlandtimes
GAROOWE(P-TIMES)- Puntland ayaa u diyaar garoobaysa doorashada baarlamaanka & tan Madaxweyne-nimada oo dhici doonta 8 January 2019, oo ay naga xigaan bilo kooban, waxaana horey […]
XOG: Ma dhab-baa in RW cusub ee dalka Itoobiya uu booqasho rasmi ah ku tagayo dalka Soomaaliya?
ADDIS ABABA(P-TIMES)- Warar hoose oo ay heshay Puntlandtimes.com kana heshay magaalooyinka Addis Ababa iyo Muqdisho ayaa daaha ka rogaya in Ra’iisulwasaaraha cusub ee dalka Itoobiya […]
XOG: M/weyne Gaas oo kulan deg deg ah iskugu yeeray M/weynayaasha D/gobaleeyada & Ajendayaal xasaasi ah oo looga hadlayo.
BAYDHABO(P-TIMES)- Wararka laga helayo Golaha Iskaashiga dawlad gobaleedyada Soomaaliya ayaa sheegaya in uu magaalada Baydhabo ka dhici doono Shirka Hogaamiyaasha Dawlad gobaleedyada, kaas oo diiradda […]
Maxaa keenay Dibu dhac kyimi safar uu RW Soomaaliya ku tagi lahaa mandiqada Puntland todobaadkan?
MUQDISHO(P-TIMES) – Warsidaha Puntlandtimes.com ayaa ogaaday in uu dib u dhacay socdaal la qorsheynayey in Ra`iisulwasaaraha dawladda Faderaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ku tagi lahaa […]
FAALLO KOOBAN: Ma laga yaabaa in la siidaayo Qalbi-Dhagax?
May 6, 2018 W LAASCAANO
Waa markii ugu horraysay oo Cabdikariim Muuse Qalbi-dhagax warkiisa si rasmi ah loo maqlo tan iyo markii tobon bilood ka hor loo dhiibay dowladda Itoobiya. […]
DEG DEG+XOG: Madaxtooyada Soomaaliya oo mucaaradkii ugu horeeyey oo abaabulan u dirtay Jubbaland & Kooxda oo hadashay maanta
MUQDISHO(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes ayaa dhawaan banaanka soo dhigay duulaamo cusub oo ay Madaxtooyada Soomaaliya qorsheysay in ay ku qaado dawlad gobaleedyada xubnaha ka ah dawladda […]
XOG: Madaxweyne kuxigeenka S/LAND oo ku soo jeeda Laascaanood, Maxayse tahay Ujeedada socdaalkiisa?
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Wararka Puntlandtimes.com ay ka helayso Madaxtooyada Hargeysa ayaa sheegaya in wafdi ka socda maamulka Somaliland, uuna hogaaminayo Madaxweyne kuxigeenka Cabdiraxmaan Saylici, ayna ka mid […]
XOG RASMI AH: Madaxweynaha & RW Soomaaliya maxay iskaga afgarteen isku shaandheyn lagu sameeyo Golaha Xukuumada?
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo & Ra`iisulwasaare Xasan Cali Kheyre ayaa xalay yeeshay kulan ku saabsan sidii isku shaandheyn loogu sameyn […]
Xiisadda Militari ee u dhaxaysa Shiinaha iyo Maraykanka oo saameyn ku yeelatay Saldhiga Jabuuti
Shiinaha ayaa beeniyay in ciidankiisa jooga saldhigga uu ku leeyahay Djibouti ay ileyska laysarka ku shiisheen diyaaradaha dagaalka Maraykanka ee isicmaalla saldhigga Maraykanka ee Djibouti. […]
DAAWO SAWIRRO: Saldhig ciidan oo Mareykanku ka sameysanayo Soomaaliya, Xageese laga dhisayaa?
May 5, 2018 W LAASCAANO
Dowladda Mareykanka ayaa dib u dhis iyo ballaarin ku sameysay Saldhigga Ciidanka Cirka ee Balli doogle ee ku yaalla Gobolka Shabeellada hoose ee Soomaaliya. […]
DAAWO: Mucaaradka Somaliland oo ka welwelsan Saldhiga ciidan ee Berbera, kuna dhawaaqay go’aan kale
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ee Waddani C/raxmaan Maxamed C/llaahi (Cirro) oo goob fagaare kula hadlayay dadka reer Berbera ayaa ka digay cawaaqibka ka dhalan kara Saldhigga […]
DHAGEYSO: Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay jiritaanka Khilaaf kala dhaxeeya Madaxda DF Soomaaliya, kana hadlay arrimo xasaasi ah
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dib ugu soo laabtay caasumada Puntland ee Garoowe, waxaana loo sameeyey soo dhaweyn ay dad badan u […]
AKHRISO: Siyaasi Cali Xaaji Warsame oo si adag uga falceliyey Masuuliyiin shalay M/weyne Gaas xilka uga qaaday Musuqmaasuq lagu soo eedeyey
May 3, 2018 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES)- Dr Cali Xaaji Warsame oo horey u soo noqday Wasiirka Waxbarashada Puntland ee Xukuumada Gaas Puntland, sidaas oo kale musharax u soo noqday Madaxweyne-nimada […]
RW Soomaaliya oo la kulmay dhigiisa Belgium Maxayse ka wada hadleen?
BRUSSELS(P-TIMES)- Ra’iisulwasaaraha Jamhuuriyada Faderaaliga ah ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa kulan gaar ah la qaatay dhigiisa dalka Belgium Charles Michel, oo ay ka wada […]
WAR DEG DEG AH: Taliye kuxigeenkii ciidamada Booliska Puntland oo lagu dhawaacay Buura-Wadal & Warar ka soo baxaya
GAROOWE(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee caasumada maamulka Puntland ayaa sheegaya in goor dhaw lagu dhaawacay deegaanka Buurawadal Taliye kuxigeenka koowaad ee ciidamada […]
DHAGEYSO: Mid kamid ah xubno shalay M/weyne Gaas ku eedeeyey musuqmaasuq oo si adag u hadlay
Maxamuud Siciid Cartan (Balcad) oo ka mid ahaa saraakiisha wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Puntland, uu shaqada ka eryay madaxwaynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali […]
DHAGEYSO: Maxkamaddaha G Banaadir oo ka cabanaya Xildhibaano & Wasiiro faragalin ku haya Arrimaha Garsoorka
Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir Dr. Aweys Sheekh Cabdulaahi ayaa eedeyn u soo jeediyay qaar ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya isagoo sheegay […]
WAR CUSUB: Ciidamada DF Soomaaliya oo Heegan sare lagaliyey & Dadkii Afduubtay oo la baadi-goobayo
MUQDISHO(P-TIMES)- Ciidamada dawladda Faderaalka ee Soomaaliya qeybahooda kala duwan ayaa heegan sare la galiyey si loo xaqiijiyo Ammaanka, gacantana loogu dhigo kooxihii ka dambeeyey Afduub […]
XOG MUHIIM AH: Madaxda PL & SLAND oo laga hadlay in aysan qaadin wax talaabo dagaal ah, Miiska wada xaajoodyadana ay aadaan.
GAROOWE/HARGEYSA(P-TIMES)- Saan-saanta colaadeed ee u dhaxaysa ciidamada maamulada Puntland & Somaliland ayaa sii kordhayey tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay ciidamada Somaliland qabsadeen deegaanka […]
Hay’adda ICRC oo war ka soo saartay Shaqaale looga Afduubtay Muqdisho
Faah faahin ayaa ka soo baxaya Afduub xalay fiidkii loo geystay Haweeney ajnabi ah oo u shaqeyneysay Hey’adda ICRC, iyadoo uu magaalada Muqdisho ka socdo […]